राप्रपा : भाग्यमानी नेता अभागी कार्यकर्ता ! – राज बस्नेत | आजको खबर, आजै अनि ताजै... Popular News Portal from Nepal, Today's News, Political News, Sports, Economics, Business, Education, Tourism, Literature, Entertainment, Music, Video, Cinema, Movies, आजको खबर, आजै अनि ताजै... Popular News Portal from Nepal, Today's News, Political News, Sports, Economics, Business, Education, Tourism, Literature, Entertainment, Music, Video, Cinema, Movies,
२०७४ फाल्गुन ९, बुधबार , नेपाली समय : १०:५७ pm | आजको खबर, संचालक : रेनुका बराल/९८४१७१६४६५ सूचना विभाग दर्ता नं. ७४/०७३-७४, सम्पादक- डिल्लीरमण सुवेदी/९८५१२७७७२१
राप्रपा : भाग्यमानी नेता अभागी कार्यकर्ता ! – राज बस्नेत
२०७४ श्रावण २७, शुक्रबार १२:४७ pm | आजको पत्रिका
पटक–पटकको विभाजनको श्रृङ्खलालाई आत्मसाथ गर्दै राप्रपाले पुनस् एक पटक आफ्नो विभाजनको इतिहासलाई दोहोर्याएको छ । राप्रपाका वरिष्ठ नेता पशुपती शम्सेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ दल राप्रपा प्रजातान्त्रिक दर्ता गराएका छन् । यसले २७ वर्षदेखिको कार्यकर्ताको एकीकृत राप्रपा हेर्ने सपना पुनः अधुरै बनाइ दिएको छ । पटक–पटक राप्रपा नामको पसल थाप्ने श्रृङ्खला यसपटक नदोहोरिनेमा कार्यकर्ता विश्वस्त देखिन्थे तर नेतृत्व तहमा रहेका नेताको स्वार्थले पुनः राप्रपाका कार्यकर्ता र राप्रपाको भविष्य माथि नै प्रश्न चिन्ह उब्जाईदिएको छ ।
राप्रपा नामको पार्टीबाट पटक–पटक सत्ताको स्वाद चाख्न पल्केकाहरूले पार्टीको मुद्धा र जनमतमा कहिल्यै आफ्नो गम्भिर्यता देखाएनन् । कार्यकर्तालाई सधैँ ताली पिट्ने मेसिनको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका राप्रपाका महामहिमले न त कार्यकर्ताको भावना अनुरूप नै काम गरे न त जनताकै ।
पार्टी भित्र मौलाएको चाप्लुसी प्रथाले पार्टीका असल कार्यकर्ता कहिल्यै फलको हकदार बन्न सकेनन् । आफू नभए अरू कसैलाई हुन नदिने रबैया नेताको मानसपटलमा अटाइनै रह्यो । नेताको दिमाग आफू सकिए राप्रपा नै सिध्याउने तर्फ बढी गएको देखिन्छ ।
राप्रपाबाट अहिलेको नेतृत्वले के पाएनन ? पार्टीको प्रमुख पददेखि राज्यको प्रमुख पदको पनि भोगविलास गरिसकेका छन् । तर उनीहरूको ध्यान जहिल्यै आफूसगैँ राप्रपा पनि सिध्याउनेमा केन्द्रीत भयो । कहिल्यै पार्टीलाई बृहत्तर रूपमा विकास गर्ने खाकाहरू बनेनन् । जनताका मुद्धालाई कहिल्यै प्राथमिकतामा राख्ने कोसिस भएन । भयो त केवल खाए म मात्रै पाए म मात्रै भयो ।
कार्यकर्ताको रगत र पसिनाको सम्मान नहुँदै यसपटक पनि राप्रपा तीन टुक्रामा विभाजित बन्न पुगेको छ । यी भाग्यमानी नेताले पुनस् आफूलाई अध्यक्ष पदमा पुर्याउन सफल भएका छन् । आफूलाई पदको केन्द्रमा हालिमुहाली गराउन सफल भएका छन् । दल सानै भएपनि १र२ ओटा मन्त्रालय पाउने नेपालको वर्तमान परिस्थितिलाई राम्रै बुझेका राप्रपा नेतृत्वहरू एकतामा बस्न कहिल्यै सिकेनन् ।
राप्रपा नामकै पार्टीबाट डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, पशुपति शम्सेर राणा पटक–पटक पार्टी अध्यक्ष र मन्त्री भए । कमल थापा पटक–पटक पार्टी अध्यक्षदेखि उपप्रधानमन्त्रीसम्म भए भने लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रधानमन्त्री नै बन्न सफल भए । अतः यिनीहरूले राप्रपाबाट के पाएनन् ? राप्रपाले यिनीहरूलाई के दिएन ?
राप्रपाकै नामबाट यो समयमा पनि ३ दर्जन सांसद भए धेरै मन्त्री पनि भए तर राप्रपा भने टुक्रा–टुक्रा भयो । यसर्थ यी नेता पदको मामलामा भाग्यमानी सावित रहँदै आएका छन् । तर जे बनेपनि यिनीहरूले आफूलाई भन्दा अरूलाई देख्न सकेनन् । जनमत र कार्यकर्ताको भावनालाई उचित व्यवस्थापन गर्न सकेनन् ।
अन्य दल एकतृत हुँदै गर्दा एकीकृत राप्रपाको सपना बोकेका दुरदराजका कार्यकर्ता भने पुनः निरास बनेका छन् । सिद्धान्त र आस्थाको लँगौटी समाती सिङ्गो गाउँमा एक्लै भएपनि पार्टीको नाम बचाइरहेका कार्यकर्ताको लागि राप्रपा नेताको यस्तो अव्यवहारिक कदमले कहिल्यै सुख शान्ति दिएन । पञ्चे, पुरानो लगायत अनेकन आरोप र लाल्छना खेपेर मोफसलमा बस्ने पार्टीका योद्धाले आफ्नै पार्टीका नेताको अनैतिक गोली खानुपरेको छ ।
राष्ट्रव्यापी भन्दापनि आफ्नो क्षेत्र केन्द्रीत राजनीतिलाई महत्व दिने राप्रपाका पदाधिकारी वर्गले अन्य जिल्लालार्इ भने सधैँ खादा पहिरिने स्थलका रूपमा मात्र प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । राप्रपा नामका कार्यकर्ता मात्र कुनै दलका यस्ता कार्यकर्ता हुन जो अरू कुनै दलका कार्यकर्ता भन्दा राष्ट्रवादी र इमान्दार छन् त्यसैले सबैभन्दा अभागी पनि। जन्मदै दुर्इटा पार्टीका रूपमा जन्मिएको राप्रपाका नेतृत्वको आपसी स्वार्थ जिरोदेखि हिरो हुँदासम्म सकिएन । यो स्वार्थको मारमा सधैँ कार्यकर्ता परिरहे ।
पार्टीमा कार्यकर्तालाई सधैँ निगाहका पात्र मात्र ठानियो । न मूल्याङ्कन छ न संरक्षण नै । एक्लो सिपाही बनेर लड्दा पनि पार्टीले कदापि कार्यकर्तासँग नियमित सम्पर्क गर्न सकेन । आफ्नो भोटले माथिल्लो नेतृत्व पदमा हालिमुहाली गरिरहँदा तल्लो तहका कर्यकर्ताले आफ्नो भोटको मूल्यको महसुस गर्न पाएनन् । यति हुँदा पनि आस्थालाई केन्द्रमा राखेर बसिरहेका राप्रपाजनहरूलाई पार्टीको गतिविधिले कहिल्यै शान्ति र सन्तुष्टी दिएन । सधैँ टुटफुटकै अभागी खेतीमा रूमल्लीरहनु पर्यो।
अहिलेको फुटको सुरूवात डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सुरूवात गरे तथापि आवेगमा कारवाही गर्न तम्सिने थापाको कारबाहीमा परेका केशर बहादुर बिष्टहरू बाहिरै थिए । डा. लोहनीले अध्यक्ष पदमा आसिन हुन नपाएको झोकमा कार्यकर्तालाई एकताको उपहार पुनः राप्रपा फुटाएर दिए । पछिल्लो समय कमल थापा नेतृत्वको राप्रपामा वरिष्ठ नेताको रूपमा रहेका राणा र चन्द चुप प्रायः थिए तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले लज्जास्पद हार बेहोरेपछि भने राणा केही सकृय हुने प्रयत्न गरेका थिए तर राणालाई सक्रिय हुन संयोजक समितिको आवश्यकता थियो। एकतापछि भएको संयोजन समितिको निर्माण गर्ने र संयोजक दिने भन्ने सहमति थापाले कार्यान्वयन गरेका थिएनन् ।
पछिल्लो समय सालिन र भद्र नेताका रूपमा परिचित राणा राप्रपामा लोकप्रिय हुँदै गइरहेका थिए भने ठिक विपरीत कमल थापा अलोकप्रिय । निर्वाचन आयोगले विधानबाट हिन्दुत्व र राजसंस्था हटाएपछि राप्रपाले आयोगको विरूद्ध कान्तिपथमा गरेको आन्दोलनमा पशुपति शम्सेरले इतिहासमै पहिलो पटक प्रहरीको लाठी खाएका थिए भने कमल थापा उक्त आन्दोलनमा सरकारका उपप्रधानमन्त्रीका रूपमा आएका थिए । त्यही दिनदेखि नै राणाको लोकप्रियता पार्टीमा ह्वात्तै बढेको थियो ।
पछिल्लो समय पार्टीका कार्यकर्ता थापाको गतिविधिबाट असन्तुष्ट थिए । थापाले स्थानीय चुनावमा पार्टीलाई कुनै रूपले पोख्त प्रयोग गर्न सकेनन् ।
थापा पार्टी एकतापछि महिला सङ्गठन बाहेक कुनै पनि भातृ सङ्गठन एकता गराउन असक्षम रहे । थापालाई कार्यकर्ताले भेट्न सगरमाथा चढ्न कष्ट गरे झैँ कष्ट गर्नुपर्ने भयो । पार्टीमा सिनियर नेता पाखा लाग्ने र चाप्लुसी गर्ने पाखा पर्ने परम्परा स्थापित भयो । आफ्नो लेनदेनको विषय नै नरहेको संविधान संसोधनको विषयमा अनावश्यक प्रतिकृया दिँदै थापा हिँडे ।
आफूले सर्वस्व पाइसकेको अवस्थामा पनि ठुलो छाती बनाएर सबैलाई दिएर दिइ खानुपर्ने सौभाग्य थापाले पाएका थिए तर सबै आफैँ मात्र खान तम्सिँदा थापा जिल्ल परे । त्यतिमात्र नभएर थापाले भुईँको टिप्न खोज्दा खल्तीको गुमाउन पुगे ।
पछिल्लो समय पशुपति शम्सेरले पनि सबैथोक समर्पण गर्दा गर्दै पनि बेरोजगार भएको महसुस गरेका थिए । यही महसुसलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा ३७ सिटका थापा १५ सिटमा खुम्चिएका छन् । पार्टी फुट्नमा राप्रपा नेपालदेखि नै थापाको टोकरीमा रहेका नेता तथा सांसदहरुमा रहेको असन्तुष्टीको ठुलो हात छ ।
फुट्ने आफैँमा एक दोषी हो । कार्यकर्ताको भाग्य पुनः एक दशकलाई फुटेको छ । राप्रपा भित्रै सङ्घर्ष गरेको भए झनै राम्रो हुन्थ्यो । तर लोभ पापले एक ठाउँमा ल्याएको हो कि भन्ने कार्यकर्तामा आशंका छ ।सम्पूर्णले सरकारमा जानको लागि फुटेका हुन् भन्ने आरोप लगाएका छन् तर पदको लागि सिद्धान्त र आस्था साट्नु कार्यकर्ता र जनमतमाथिको विल्कुलै पाप हो । फुट किन आवश्यक थियो थापामाथि दोषारोपण गरेर मात्र उत्तर मिल्ने छैन ।
फुटले पार्टीका तमाम युवा र हिन्दुत्वको भविष्य समाप्त हुने शंङ्का उब्जिएको छ र यससँगै पार्टीको भविष्य माथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
राप्रपाको फुटको आरोप राप्रपाको तिब्र उदयबाट आत्तिएकाहरू तर्फ लागेको छ । यसमा तपाईंहरू किन नाच्नु भो कार्यकर्तालाई उत्तर दिन आवश्यक छ । पछिल्लो समय दुई तीहाई बहुमतका साथ शासन गर्ने देउवाको मनसाय र भारतको कमल थापा प्रतिको नकरात्मक र राणा प्रतिको सकरात्मक सोचले राप्रपाको विभाजनमा काम गरेको पनि आरोपहरू आउने गरेका छन् र फुट्नेहरूले यसलाई कामले चिर्नु पर्नेछ ।
पछिल्लो समय परिवर्तन र माओवादीको प्रत्यक्ष थ्रेट बनेको राप्रपा माथि चौतर्फी हमला भएको थियो । यसैबीच पार्टी नेतृत्वले पनि बाटो बिराउन पुगे । सत्तालिप्सा र स्वार्थको लागि राप्रपाले सिद्धान्त बली चढायो भन्ने हल्ला जनतामा व्याप्त हुँदा आएको विभाजनले राप्रपा नाम प्रति जनता झनै नकरात्मक बनेका छन् ।
मधेसवादी दल र राप्रपाको समान नियति भनेको फुटको अङ्गिकार हो । तथापि पछिल्लो समय मधेसवादी दल एक ठाउँमा आउँदै गर्दा राप्रपाहरू तीन टुक्रा भएका छन् । परिवर्तनलाई पनि परिवर्तन गर्ने लक्ष्यको सपना कार्यकर्तालाई बाँडेका नेतागण अन्ततः आफैँ चिप्लिएका छन् र कार्यकर्ता पुनः हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भएका छन् ।
यात्रा कता तिरको ?
स्थानीय चुनावको दोस्रो चरण सकिँदै गर्दा लगभग डेढ लाख हाराहारी भोट पाएको राप्रपाहरूको यात्रा अब कता हुन्छ हेर्न बाँकी छ ।३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको सीमा अब तीनैवटा राप्रपालाई चुम्न कठिन देखिन्छ । तथापि राप्रपाहरूमा विनास काले विपरित बुद्धी नै हाबी देखिन्छ ।
गाई चिन्ह प्रति जनतामा बढेको अविश्वासलाई पार्टीमा स्वस्थ बहस भन्दा नी जुँगा र प्रतिष्ठाको विषयको लडाई बनाइयो अन्ततः थापाले दोष पनि यहीँ खेप्नु पर्यो कि चिन्ह थापाले हलो नमान्दा यस्तो भयो ।
पार्टीमा साङ्गठानिक तिब्रता तिर भन्दा नि आदेशको परिधि बढाउने र हिन्दुत्व मात्र भजेर बस्ने चलनले महत्व पायो । युवा, विद्यार्थीको समायोजनमा ध्यान नदिँदा पार्टी फुट्दा पनि युवा, विद्यार्थी वर्ग हस्तक्षेप गर्न भन्दा विभाजित बन्न पुगे र राप्रपाहरूको विभाजनको यात्रालाई रोक्न सकेनन् ।
स्थापनाकालदेखि नै भावि पुस्ताको भविष्यलाई बली दिएर आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेका राप्रपाका नेतृत्वले पटक पटक धोका दिए ।आफूभन्दा माथि पार्टीलाई कहिल्यै राख्न सकेनन् । आफ्नैले आफ्नोको विरूद्ध खेदो खन्ने परम्परा रहिनै रह्यो । यतिसम्म कि सबैभन्दा स्वार्थी नेतृत्व रहेको पार्टीको रूपमा राप्रपा परिचित बन्न पुगेको छ ।
पार्टी विघटन र विलय उन्मुख हुँदै गर्दा शीर्ष नेतृत्वले अहंकार त्याग्न नसक्नु नै दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो । फ्रेण्डसिप डेका दिन बिहानै नेताहरू थापा, राणा र चन्द बैठकमा बसेका थिए तर अध्यक्ष थापाले महानता देखाउन सकेनन् र फ्रेण्डसिप डे कै दिन राप्रपा विभाजन हुन पुग्यो । अध्यक्ष थापाले केही त्याग गर्न आवश्यक थियो तर अन्तिम बैठक बस्दै गर्दा संस्थापन भएका नाताले थापाले कुनै हालतमा पार्टीको विभाजन रोक्नु पर्थ्यो तर आफू हालीमुहाली र कार्यकर्तालाई ताली पिटाएर राख्न पल्केका स्वार्थी, लोभी पापीहरूले कार्यकर्ता, सिद्धान्त र पार्टी भन्दा माथि आफ्नो स्वार्थ राख्न पुगे ।
बस्नेत राप्रविसंका महासचिव हुन्